Girazi Bhodhoro Vagadziri China girazi Bhodhoro Vatengesi & Fekitori
Mapurasitiki Kurongedza Zvigadzirwa
Aluminium-Plastiki Dhonza Mhete Bhodhoro Cap
Mabhodhoro eGreen nemabhodhoro edoro
Bhodhoro rekuzora 【Hutano uye Yakachengeteka Chinyorwa】 - Mist spray bhodhoro rakagadzirwa nezvinhu zvakagamuchirwa, BPA-yemahara, isina lead. Zvichakadaro, mabhodhoro ese aya anoshandiswazve, unogona kuachenesa mushure mekutanga kushandisa uye kuichengeta zvakanaka. 【Dhizaina-Rakajeka Dhizaini】 - Iyo diki epurasitiki yekumwaya bhodhoro ine kapu uye inodonhedza-proof chiuno mukati inodzivirira mukwende wako kubva mukudonha uye kurasikira. Iyi dhizaini ichaita kuti unzwe kusununguka panguva yekufamba. 【Fine Mist Spray】 - Mabhodhoro edu ekupfapfa anotora nanometer ...
Bhodhoro rezvinwiwa uye mabhodhoro ezvinonhuwira
3.Olive Bhodhoro remafuta Cheka iyo inotapira uye ine hutano hupfu timu, kukupa iwe hwakanakisa sevhisi sevhisi. Kana iwe uine chero mibvunzo, ndapota taura nesu. Tichaichengeta munguva. Supply: Tine fekitori yedu pachedu, saka tinogona kupa zvigadzirwa zvedu. Fekitori yedu inoshanda mumafuta emuorivhi kune akawanda t ...
Grolsch Mabhodhoro eDoro Brewing. Brewing mabhodhoro akakosha pakugadzira Beer, Kombucha Mabhodhoro, kana Fermentation Mabhodhoro! Aya maFlip Top Bhodhoro anoita kuti Kumba Brewing kuve nyore! Imwe neimwe Flip yepamusoro girazi bhodhoro Zvisimbiso Zvakasimba. Bheri rako richaramba riri Nyowani uye Ridzivirirwa neSeal yeiyi Swing Top Bhodhoro! Amber Glass Bhodhoro inodzivirira zvirimo kubva kune inokuvadza UV mwaranzi. Brown Girazi Mabhodhoro anosarudzwa Beer Bhodhoro kana Fermenting Mabhodhoro! Girazi Mabhodhoro neCaps anobata 500 mL, kana 16 oz, zvinoenzana 1 Pint. Dar ...
Bika chikafu chinotapira uye chine hutano. Inochengeta mafuta ako omuorivhi akadzivirirwa kubva pakuonekwa kweoksijeni, mwenje & kupisa Yakagadzirwa negirazi yepamusoro-soro, yakasimba uye inopwanya-isingaite Sevhisi yakanaka . Kana iwe uine chero mibvunzo, ndapota taura nesu. Tichazvichengeta nekufamba kwenguva. Kupa: Tine fekitori yedu pachedu, saka tinogona kupa zvigadzirwa zvedu. Fekitori yedu inoshanda mumafuta emuorivhi kweanopfuura makore gumi, inyanzvi ...
Zita Zita reGirazi Bhodhoro Kugona 250ml, 375ml, 500ml, 750ml Kuisa chisimbiso mhando sikuruu chivharo / pvc cork Kupakata matanda nhovo, imwe 40HQ: 21 pallets. imwe nhovo: zvidimbu 1575. kana bepa katoni MOQ 10000 zvidimbu Sample Kopa hongu Sample Kurongeka Kana yangosimbiswa, iwo masampuli achatumirwa mukati memazuva manomwe. Iyo joker inokwana 750 ml, waini tsvuku. Iyo ine yakanaka, yakachena yekunze ine girazi regirazi uye pasi punk Isu kaputuru ine dhizaini dhizaini, hapana tambo inooneka, uye tinoumba tamper-proof ...
Chigadzirwa zita 250ml runako kuchengetwa wega PET bhodhoro shampoo mabhodhoro Ruvara Yakagadziriswa Kugona 250ml MOQ 10000pcs Kurema 23g Neck saizi 24/410 Zvimiro Magadzirirwo: 1.Midziyo: PET. Izvo zvekutanga zvinhu zvakachena chose uye nyowani nyowani, zvakatipoteredza, zvakakwana zvakakwana kune zvekushongedza kurongedza, zvekurapa uye chikafu kurongedza futi. 2. Ruvara: Iyo pantone yemavara kana chaiwo sampuli yekureva. 3.Printings: Silk kudhinda, kupisa kutsika uye offset kudhinda, pepa la ...
.Zvinonhuwira bhodhoro, Hutano uye Yakachengeteka Chinyorwa】 - Mist spray bhodhoro rakagadzirwa nezvinhu zvakagamuchirwa zvinhu, BPA-yemahara, isina lead. Zvichakadaro, mabhodhoro ese aya anoshandiswazve, unogona kuachenesa mushure mekutanga kushandisa uye kuichengeta zvakanaka. 【Dhizaina-Rakajeka Dhizaini】 - Iyo diki epurasitiki yekumwaya bhodhoro ine kapu uye inodonhedza-proof chiuno mukati inodzivirira mukwende wako kubva mukudonha uye kurasikira. Iyi dhizaini ichaita kuti unzwe kusununguka panguva yekufamba. 【Fine Mist Spray】 - Hedu pfapfaidzo mabhodhoro anotora nanomete ...
Yedu inoyevedza yakajeka yakajeka dombo regirazi pefiyumu bhodhoro ndiyo mudziyo wakakwana wemafuta ako uye cologne. Iwe unogona nyore kuzadza neakasarudzika musanganiswa wemafuta akakosha, kana kudurura mumafuta ako aunofarira kubva kutenderera pasirese. Izvo zvakare zvakanaka pakugadzira chipo saizi zvinonhuwira kana zvipo zveKisimusi. Mabhodhoro edu emhando yepamusoro anobata hovhoni imwe yemunhuwi waunofarira. Shiny simbi maatomizers anoparadzira kunze kunhuhwirira kunonhuwirira. Frosted acrylic cap inowedzera danho rekunatsiridza iro mamwe mabhodhoro asingaite, uye haina ...